NayaPatro Blogs: राशि अनुसारको व्यापार रोजे मालामाल, यस्तो छ विभिन्न राशिलाई फाप्ने व्यापार र क्षेत्र
तपाईं कुनै विजिनेश सुरु गर्ने सोचिरहनुभएको छ ? वा सुरु गर्न गइरहनु भएको छ कि ? वा, कुन विषयमा प्रवेश गर्ने वा करिअर बनाउने भन्ने अलमलमा पो हुनुहुन्छ कि ? यदि छ भने तपाईंले राशिसँग जोडिएका केही कुराहरुतर्फ ध्यान दिनुभयो भने यसले ठूलो सहयोग हुनसक्छ । अझ एसएलसी उत्तीर्ण भएर आगामी दिनमा कुन विषय रोज्ने भन्ने बिलखबन्दमा रहेकाहरुका लागि यो सामाग्री अझ बढी सहयोगी बन्नसक्छ । ज्योतिष विज्ञानका अनुसार करिअर, पढाई तथा व्यापार व्यवसायको सफलताका लागि राशिको निकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यदि राशिलाई ध्यानमा राखेर पढाई, करिअर तथा व्यवसाय सुरु गर्ने हो भने सफल हुने संभावना बढी...
सफल व्यवसायी बन्न सजिलो छैन । तपाईं सफल व्यवसायी बन्न चाहनुहुन्छ भने यसमा वर्षौको मेहेनत लाग्छसक्छ । व्यापारमा तपाईंको सानो गल्तीले ठूलो घाटा पनि हुनसक्छ । कहिलेकाही वास्तु दोष पनि व्यापारका लागि बाधक बनिदिन्छ । यसकारण व्यापार सुरु गर्नुअघि वास्तुलाई ध्यानमा राख्नु हितकर हुन्छ । यही कारण धेरै कम्पनीहरु हिजोआज आफ्नो विजिनेश चम्काउन वास्तुको साहारा लिन थालेका छन् । हाल वास्तुमा वैज्ञानिक ढंगको सुधार भइसकेको छ । वास्तु दोष मेटाउन घर वा भवनमा कुनै तोडफोडको आवश्यकता पर्दैन र केही वैज्ञानिक विधि अपनाएर वास्तु दोष मेटाउँदा भवनभित्रको वातावरण समेत आकर्षक र...
प्राचिन पुर्विय दर्शनमध्य सामुन्द्रिक शास्त्र एउटा यस्तो शास्त्र हो । जसले मानिसको शरीरको प्रत्येक अंगको आकार प्रकारको आधारमा उसको आचरण, स्वभाव, व्यवहार, भविष्य आदिबारे जानकारी गराउँदछ। साथै मानिसको शिरदेखि पाउसम्मका हरेक अंग विशेष लक्षणको हुने र ती अंगहरुबाट मानिसको गुण पहिल्याउन सक्ने हुन्छ। हामी यहाँ कुन कन्या कस्ती छन् भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरो बताउदै छौ। १. जुन कन्याका आँखा हरिणका जस्ता समान हुन्छन् सेतो भागको अन्तमा हल्का रातो हुन्छ यस्ता कन्या भाग्यशाली र सुखभोग पाउने हुन्छन् ।२. जुन कन्याको जिब्रो रातो र कोमल हुन्छ उ आफुले त सुख भोग गर्छिन्...
भवन-निर्माणमा वास्तुको महत्व
वास्तु शास्त्रको अनुसार भवन निर्माण को लागि चुनिएको भूखण्ड आयताकार वा वर्गाकार हुनुपर्दछ। ्जसको चारै तर्फ़ 90 अंश को कोण होस। यस्तो प्लाट वास्तु नियमानुसार उत्तम श्रेणी को प्लाट मानिन्छ। हामि वास्तुका नियमहरुलाइ ध्यानमा राखेर काफी हद सम्म वास्तु को द्वारा आफ़्नो जीवन लाइ सुखमय बनाउन सक्छौ। भूखण्ड को चयन गर्ने समयमा हमेशा ध्यान राख्नुहोस कि भवन निर्माण को लागि चुनिएको भूखण्ड बन्द गली वा कुना को न होस। यस्तो घरमा निवास गर्ने ब्यक्तिलाइ सन्तान को चिन्ता र नौकरी, व्यापार मा हानि, शरीर-कष्ट आदि परेशानि भएको पाइएको छ। घर ्को भुइलाइ समतलराख्ने । फर्श को ढलान...
औलामा पाईने चक्रको फल
औलाहरूको र औठाको टुप्पोमा जुन भुमरी झै घुमेको हुन्छ त्यसलाई चक्र भनिन्छ । जुन व्यक्तिको औंलामा यस्तो प्रकारको चक्र छ भने जातकको धार्मिक प्रवृत्तिको र धर्ममा जोडिएको कार्यमा विशेष रुचि हुन्छ । साथै ऐर्श्वर्यद्वारा पर्ूण्ा, उत्तमजीवन विताउँदछन् । यस्ता व्यक्तिहरू रहस्यमय, व्यवहारिक विचार बला बनाउनुको साथै अनुसन्धान र नयाँ विचारको जन्म दिनेखालको हुन्छन् । चक्रको औला अनुसार फलः- १)औठामा चक्र छ भनेः-जातकलाई पैत्रृक सम्पत्तिको सुख मिल्छ र त्यस सम्पत्तिलाई बृद्धि गर्ने हुन्छ ।यस्ता व्यक्तिहरू श्रेष्ठ गुणको स्वामी हुनुको साथै कठिन कार्य गर्नको लागि सधै तत्पर...